Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle oo baarlamaanka maamulkaasi ugu baaqay in ay ka shiraan Khilaafka gobalka Hiiraan – Kalfadhi
Madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo wareysi siiyay Kalfadhi ayaa walaac ka muujiyay xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee ka taagan Hirshabeelle, gaar ahaan xaaladda magaalada Beladweyne ee gobalka Hiiraan.
Mr Cosoble ayaa sheegay in dhibaatada ka taagan gobalka Hiiraan ay soo jirtay ugu yaraan 2dii sano ee la soo dhaafay islamarkaana ay sabab u tahay qorshe la’aan ka jirta gobalka. Waxa ugu adag ee khilaafka sababay ayuu ku tilmaamay in maamulka Hirshabeelle aysan Beladweyen iyo guud ahaan gobalka Hiiraan ku celin lacagta laga qaado gobalka arintaasna ay sababtay khilaafka hadda taagan.
“Lacagta waa wax aad u xun oo dadka iska horkeena” ayuu yiri Cali Cabdullaahi Cosoble Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle. “Aniga markii aan joogay waxaan mideeyay lacagta Hiiraan iyo Sh/dhexe waxaana mushaar u qoray dhamaan maamulada gobalada iyo degmooyinka, lacagta gobalka kasta laga qaadana Akoon ku yaala isla gobalka ayaa lagu ridi jiray si aan shaki u imaanin” ayuu yiri Madaxweyinihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo la hadlay Kalfadhi.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waar iyo Guddoomiyaha xilka laga qaaday ee gobalka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar “Dabageed” ayuu ka dalbaday in ay xaaladda dejiyaan oo aan la bur burin maamulka oo dhismihiisa dhib badna laga maray sida uu hadalka u dhigay.
“Walaalahey Waare iyo Yuusuf waxaan ugu baaqayaa in ay isdejiyaan oo laga wada hadlo dhibkii dhacay, hadii sidaan ay wax ku sii socdaan waxaa lumaya sharciyadadii iyo xeerarkii aan dagsanay” ayuu yiri Cali Cabdullaahi Cosoble Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle.
Dhinaca Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa dhaliilay baarlamaanka Hirshabeelle oo aan xil weyn iska saarin xaaladda ka jirta gobalka Hiiraan iyo guud ahaan Hirshabeelle isagoo ugu baaqay in ay ka fariistaan arimaha soo cusboonaaday.
“Waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka in ay ka fariistaan xaaladda gobalka waayo iyagaa matala dadka dega Hirshabeelle mana ahaan in kacdoon dadweyne dhaco iyadoo ay joogaan wakiiladii” ayuu yiri Mr Cosoble oo wareysi siiyay Kalfadhi.